Maxamed Mursi iyo hogaamiyeyaasha kala ah Muxamed Baltaaji iyo Caasim Al-Caryaan ayay Maxkamaddu ku xukantay xarig dhan muddo labaatan sano ah iyo Shan Sanno dheeraad ah oo ilaalo ay ka heyn doonaan Ciidamada Booliiska marka uu Xukunka u dhamaado kadib.
Sida uu sheegay Qaadiga Maxkamadda Dhaaguutka Masar waxaa Mursi iyo xubnaha kale ee Ururka Ikhwaanka lagu eedeeyay inay xoog u adeegsadeen dibadbaxyo looga soo horjeeday Maamulkooda oo horraantii sanadkii 2013 ka dhacay Qasriga "Itixaadiya" ee magaalada Qaahira.
Sidoo kale waxay Maxkamaddu tobon sano oo xarig ah ku riday qaar ka tirsan kaaliyeyaashii Maxamed Mursi intii uu taladu hayay, kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dacwadaha iyo eedeymaha loo heysto Hogaamiyihii hore ee dalka Masar.
Xukunkan lagu riday Maxamed Mursi ka sokow waxa uu sidoo kale loo heystaa Afar qadiyadood oo ay ka mid yihiin inuu xiriir la lahaa Ururka Xammaas iyo Ururka Shiiciga ee Xizbu-laah la magac baxay, waxaana la filayaa in 16-ka bisha May ee soo socota lagu rido Xukunno kale oo dheeraad ah.
Xaaladda goobta ay Maxkamaddu ka socotay ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo Afhayeen u hadlay Wasaaradda arrimaha gudaha ee Maamulka dalka Masar oo lagu magacaabo Haani Cabdul-Ladhiif uu sheegay in Ciidamo badan la geeyay Akeedeemiyadda Booliiska ee bariga magaalada Qaahira, halkaas oo ay ka socotay Maxkamadeynta ka dhanka ah Maxamed Mursi iyo Maamulkiisa.
Saacado ka hor inta aysan billaaban Maxkamadeynta Hogaamiyeyaasha Ururka Ikhwaanul Muslimiinka dalka Masar waxaa Bayaan kasoo baxay Jamaacadu ay ugu baaqday taageerayaasheeda inay isagu soo baxaan dibadbaxyo waaweyn oo ay ku cambaareynayaan Xukunkaasi.
Ururka Ikhwaanku waxa uu taageerayaashiisu uu ka dalbaday inay isagu soo baxaan kacdoon dadweyne oo ballaaran, hase yeeshee Ciidamada Nidaamka Riddada ee Cabdul-Fataax Siisii ayaa iyaguna galay feejignaa dheeraad ah, waxaana lagu arkayay waddooyinka iyagoo saaran gaadiidka gaashmaan, una diyaar ah inay ka hortagaan isku soo bax kasta oo ay sameynayaan taageerayaasha Ikhwaanul Muslimiinka.